Izindaba - Ziyini izinto zokwakha ezihlanganayo?
Yini izinto zokwakha okunciphisayo?
Ukucekelwa phansi komquba kungumkhawulo wokwehlukaniswa kwemvelo, ukuqokwa kwemvelo engamagciwane, isikhathi sokuwohloka, okujwayelekile nomthelela emvelweni. I-European Union inencazelo yalokhu, echazwa ngokuthi "impahla enamakhompiyutha". Ngokusho kwe-EN13432, izinto zokwenziwa komquba kumele zibonise izici zokushiswa kwemvelo, okungukuthi, ikhono lezinto zokwenziwa komquba ukuze liguqulwe libe yi-CO2 ngaphansi kwesenzo sezinto ezincane eziphilayo. Lesi sakhiwo silinganiswe ngendlela yokuhlola ejwayelekile yelabhorethri: i-en14046 (futhi ivezwe njenge-iso14855: i-biodegradability ngaphansi kwezimo ezilawulwayo zomquba). Ukuze ukhombise ukwehlukaniswa kwe-biodegradability okuphelele, okungenani i-90% yezinga le-biodegradation kufanele ifinyelelwe ezinyangeni ezingaphansi kwezingu-6.
I-EU ikhipha imithethonqubo ezintweni eziwohlokayo ezinciphisayo
Ukwahlukana kukalwa ekuhlolweni komquba womshayeli (en14045), okusho ukwahlukaniswa nokulahleka kokubonakala (akukho ukungcola okubonakalayo) emqubeni wokugcina. Amasampula ezinto zokuhlola afakwa imvuthuluka yemvelo izinyanga ezi-3. Umquba wokugcina bese usiwa ngesihlungo esingu-2 mm. Ubuningi bezinsalela zokuhlolwa ngosayizi> 2mm buzoba ngaphansi kuka-10% wobunzima bokuqala.
Inqubo yomjikelezo wezinto ezingavimba
Awuzange ube nomphumela omubi enqubeni yokwenza umquba, eqinisekiswe ukuhlolwa kwesikali somquba somshayeli. Izinga eliphansi lezinsimbi ezisindayo (ngaphansi kwesilinganiso esinikeziwe) futhi akukho miphumela emibi ekwenziweni komquba kokugcina (isb. Ukuncishiswa kwamanani we-agronomic nokuba khona kwemiphumela ye-ecotoxicological ekukhuleni kwezitshalo). Ukuhlolwa kokukhula kwezitshalo (i-oecd208 eguquliwe) nokunye ukuhlaziywa kwe-physicochemical kwasetshenziswa ekwenzeni umquba lapho ukwehliswa kwezinto zokuhlola kwenzeka.
Izinto zokwakha izinto ezibolayo thina (Wuhu Radar Plastic Company Limited) imikhiqizo yokukhiqiza enayo
Sithatha i-PLA ne-PBAT njengezinto zethu eziyinhloko zemikhiqizo yethu ebolayo
1, ukugoqwa kokunamathela kwe-PLA, ifilimu le-PLA Stretch, ifilimu lokupakisha le-PLA;
2, izikhwama ze-PLA (izikhwama zezinja ezibolayo zokubola, izikhwama zemfucumfucu ezibolayo), okuyi-PLA + PBAT;
3, PLA utshani, okubolayo okubolayo PLA ukuphuza Utshani.
Imikhiqizo yethu yonke i-100% iyabola futhi i-compostable, okuyi-EN13432, ASTM D6400, BPI, FDA, evunyelwe.
Izikhwama zemfucumfucu ezingabizi, Ukugoqwa Kwe-Eco Cling Wrap Ushukela, Izikhwama Zodoti Ezilahlwayo Ezilahlayo, Ifilimu Elolayo Lokubolayo, Ukusonga Okugoqekayo Okubolayo, Izikhwama Ezinokwakhiwa,